Voaloboka | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fomba handrahoana sy ny fanatsarana ny voankazo amin'ny vodka
Ny natiora dia namorona ny fepetra rehetra ho an'ny fahasalaman'ny olombelona. Na dia eo aza ny olana ara-tontolo iainana amin'izao androntsika izao, lavitra ny tanàna lehibe, mbola misy ny tany am-boalohany, izay tsy nahatratra ny sivilizasiona. Ny iray amin'ireo "nosy" ireo dia ny Siberiana taiga manan-karena indrindra, izay mizara matetika ny fanomezam-pahasoavany.
Karazam-pambolena voaloboka eo amin'ny làlan-tendrony, toro-hevitra ho an'ny mpandidy
Mety any amin'ny faritra misy anao matetika ny ririnina mandalo sy ny thermometer amin'ny ririnina matetika no mamakivaky ny marika amin'ny -20, saingy tsy maninona ny manamboatra tanimboaloboka ary, manaraka ny torohevitsika, dia maniry vokatra tsara avy amin'ny volon'ireo masoandro. Ny karazana voaloboka hitombo ho an'ny mpandray anjara eo amin'ny lalam-be afovoany Mazava ho azy, ny voaloboka dia mitombo ao amin'ny trano fatoriana fahavaratra.
Ahoana no hisorohana sy hiadiana amin'ny voalavo voaloboka?
Ny grapes, amin'ny ankapobeny, dia heverina ho sarotra be sy mora hambolena ao anaty orinasa iray. Na izany aza, misy bibikely sy aretina tena mampidi-doza ho azy. Noho izany, ilaina ny miomana mialoha amin'ny olana mety hitranga, izay mahazatra ireo bibikely malaza indrindra. Fantatrao ve? Ny fanadihadiana ofisialy nataon'ny mpahay siansa dia mampiseho fa mihena isan-taona ny vokatra fanosotra voaloto avy amin'ny bibikely, ary raha tsy misy ny fepetra ilaina mba hisorohana ny aretina, dia mety hahatratra ny antsasaky ny vokatra ny fahavoazana.
Ny voankazo mahazatra ary ny fanaraha-maso mahomby azy ireo
Ny aretina voaloboka - loza mananontanona an'ity zavamaniry ity. Ireo karazana mamy sy lehibe dia mbola mazoto indrindra ho azy ireo, na dia eo aza ny asan'ny mpamboly. Noho izany, mba hahazoana vokatra tsara dia mila mahafantatra ny fomba fitondran'ny voaloboka ianao amin'ny aretina. Fantatrao ve? Grapes - ny hany zavamaniry eto amin'izao tontolo izao izay mianatra siansa - ampelografia.
Ahoana ny fomba hiatrehana voalavo
Maro ny mpikaroka zaridaina tia mamolavola voaloboka. Mankasitraka ny toetra mahasoa sy ny tsirony mahavariana izy. Na izany aza anefa, ny mety aterak'io vokatra io dia mety atahorana raha misy fiantraikany amin'ny bibikely ny zavamaniry. Matetika ny voaloboka dia atahorana amin'ny tsoka, fantatra kokoa amin'ny hoe matevina. Rehefa voan'ny aretina ianao, dia mety ho very 30% ny vokatra, ary raha tsy manao fitsaboana ianao dia mety ho very 50%.
Ny fomba famolavolana voaloboka amin'ny lohataona
Ny fambolena varimbazaha toy ny voaloboka dia manjary mihamitombo hatrany amin'ny trano fonenana fahavaratra. Maro no mikatsaka ny hanangona latabatra sy karazana teknisiana ho an'ny famokarana selam-pototra. Nefa ity lahatsoratra ity dia tsy momba izany. Hiresaka momba ny fomba famolavolana voaloboka eo amin'ny teti-tenantsika isika miaraka amin'ireo zana-ketsa tsy misy fanampiana amin'ny lohataona.
Ny fomba hanamboarana voaloboka ao amin'ny Urals: fambolena sy fiahiana ny voankazo amin'ny toetrandro mangatsiaka
Ny vanim-potoana naniry nandritra ny fotoana lava dia ny tombontsoa avy amin'ireo firenena any atsimo. Ny zava-misy dia heverina ho hafanana ny fambolena. Saingy noho ny asan'ny mpamboly, ny fambolena voaloboka tao amin'ny Urals, nanjary tena izy ny fambolena sy ny fambolena. Amin'izao fotoana izao dia tsy vitan'ny mamboly ao amin'ny faritanin'ny Ural ihany ny fambolena, fa mampiseho koa ny faktiora avo lenta.
Inona no atao hoe alim-pitadiavana amin'ny voaloboka, ary ny fomba hanasitranana izany?
Iray amin'ireo fahavalo mampidi-doza indrindra ny aretina azo avy amin'ny fungera. Maro ny mpikaroka no niezaka niady tamin'io aretina io nandritra ny roapolo taona mahery, fa tsy ny rehetra no nahomby. Andeha hojerentsika ny antony mahatonga ny aretina ary hahitana ny fomba hiatrehana izany. Famaritana sy lozam-pandrefesana Malemy (na trondro mena) - iray amin'ireo lozam-pifamoivoizana goavana indrindra amin'ny karazam-boaloboka Eoropeana.
Ny fambolena voaloboka ny voaloboka: namboly sy fikarakarana
Kishmish dia anarana iombonana ho an'ny karazam-bozaka samihafa isan-karazany, izay miavaka amin'ny haben'izy ireo kely sy ny tsiro malefaka, ary ny tsy fisian'ny voa ao anatiny. Tsy maintsy dinihina amin'ity fotoana ity rehefa misafidy voaloboka amin'ny ravina ianao mba hambolena ao amin'ilay tranokala, satria ny fambolena sy ny fambolena ny raviny ary ny toetra mampiavaka ny fikarakarana ny zavamaniry dia mety tsy mitovy amin'ny karazany samihafa.
Inona no zava-mahadomelina ampiasain'ny tanimboaloboka: fungicides ho an'ny voaloboka
Rehefa mitombo ny voaloboka ao an-trano, dia tokony ho tsaroana fa mora kokoa amin'ny aretina sy ny bibikely izy io raha ampitahaina amin'ny karazana masira. Mba hisorohana ny fampihenana ny kalitao sy ny haben'ny vokatra vokariny, dia asaina manadio ny voaloboka miaraka amin'ny fungicides, izay hanome fiarovana amin'ny artifisialy amin'ny olana toy izany.
Fiompiana "Cabernet Sauvignon": ny toetra sy ny teknolojia amin'ny fambolena
Ny divay Cabernet dia fantatry ny mpihiran'ny divay mena maina. Saika ny firenena rehetra misy ny famokarana manokana, avy any Kanada mangatsiaka mba hanondrahana an'i Libanona, dia mitombo ny karazana voaloboka tsy misy azy, izay tsy misy volom-borona maitso matevina. Ny famokarana varimbazaha atao hoe Cabernet dia mamokatra an'i Italia sy Espana, Ukraine ary Moldova, Chile ary Arzantina, ary koa Afrika Atsimo, Aostralia ary Etazonia.
Ahoana ny fomba fitondrahana sy famokarana voaloboka amin'ny lohataona
Androany dia hiresaka momba ny fomba fitondrahana sy famokarana voaloboka amin'ny lohataona isika. Maro ny tompona nanambady voaloboka nandritra ny am-polo taonany, efa zatra niasa tamina karazana voaloboka. Na izany aza, miova ny toetr'andro, ary ny toetr'andro sy ny tsy fahampian-tsakafo dia miteraka ny fambolena sy ny "loka" amin'ny karazana aretina isan-karazany.
Ahoana no hanapahana voaloboka amin'ny tifitra tsy ilaina amin'ny fahavaratra
Ny fanangonana fahavaratra ny voaloboka dia ampahany manan-danja amin'ny fikarakarana an'io zavamaniry io. Tena zava-dehibe tokoa ho an'ireo faritra izay fohy ny fahavaratra ary ny voaloboka dia tsy mahazo ny hazavan'ny masoandro ho an'ny matsiro tsara. Azo atao ve ny manalefaka voaloboka amin'ny fahavaratra? Ny tombony tsy azo lavina amin'ny fotoam-pisakafoana amin'ny fahavaratra dia amin'ny fahavaratra dia manampy amin'ny fampitomboana ny habetsahana sy hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra.
Ahoana no hanaovana divay amin'ny voaloboka: ny tsiambaratelon'ny famokarana an-trano
Androany, misy karazana divay maro isan-karazany avy amin'ny voankazo samihafa. Fa ny tena malaza dia mbola misy ny divay. Hiresaka momba ny karazam-boaloboka hisafidianana sy ny fomba hanatsoantsika zava-pisotro mamy ao anatin'ity lahatsoratra ity. Ny karazana voaloboka mifidy Raha manamboatra divay voaloboka ao an-trano ianao dia afaka misafidy tanteraka ny karazan'io zavamaniry io.
Ahoana ny hiatrehana ny oidium amin'ny voaloboka
Ny grapes, tahaka ny zavamaniry hafa nambolena, dia mety manana aretina isan-karazany. Mampiditra ravinkazo, fotsy izy ireo, ka manimba ny zavamaniry. Oidium (anarana hafa dia aretin-koditra) dia aretina iombonana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny oidium amin'ny voaloboka isika: jereo ny fitsaboana io aretina io, ary diniho ny fomba tsara indrindra hikarakarana ilay orinasa.
Fambolena sy fikarakarana voaloboka "Memory Dombkovskaya" ao amin'ny firenena
Grapes - karazana zavamaniry avy amin'ny fianakaviana Vinogradovye, izay manana karazan-tsakafo maherin'ny 70, mitombo amin'ny ankamaroan'ny toetr'andro. Variety "Memory Dombkovskoy" isan-karazany mahafinaritra mahavokatra voankazo sy loko manitra be. Ny tantaran'ny fifidianana voaloboka "Ho fahatsiarovana an'i Dombkovskaya" dia navotsotry ny mpitsionera avy ao Orenburg Shatilov Fyodor Ilyich tokony ho telopolo taona lasa izay.
Inona no tena tsara "Julian" sy ny fomba hikarakarana azy
Vao haingana, ny nalaza "Julian" dia nahazo laza malaza noho ny toetrany, ary ny karazam-bozaka mahavelona amin'ity karazany ity dia ny avonavon'ny mpamboly. Ao amin'ity lahatsoratra ity no hahafantarantsika ny voaloboka "Julian" - ny famaritana sy ny fitsipika momba ny karazana, ny sary. Tantara io karazany io dia nokarakarain'ny mpangalatra amina mpiangona iray.
Tokony hikarakara voaloboka mandritra ny voninkazo ve aho?
Ny vanim-potoana izay mamaritra ny hatsaran'ny vokatra manaraka dia ny voninkazo ny voaloboka. Tena zava-dehibe ny misoroka ny fahaverezan'ity vanim-potoana ara-kolotsaina ity. Ary raha tsy misy ny fepetra eo amin'ny toetr'andro, dia tsy maintsy atao ny miankina amin'ny tanan'ny mpamboly. Famaritana sy ny endriky ny vanim-potoana Rehefa maniry ny voninkazo, ny toetry ny mari-pana, ny haavon'ny haavon'ny lanitra, ary ny fikarakarana ny zaridaina ho an'ny kolontsaina dia tena zava-dehibe.
Torohevitra ho an'ny fitomboan'ny karazan-tsakafo Buffet
Tamin'ny fiantombohan'ny fararano, ny vokatra farany dia niseho tao amin'ny toeram-pivarotana fivarotana sy fivarotana. Isika rehetra dia miandrandra fatratra amin'izao fotoana izao raha afaka mankafy tanteraka ny tsiro mahafinaritra sy ny fofona manitra avy amin'ireo voankazo matsiro. Faly izy ireo amin'ny karazany sy karazany isan-karazany, izay mampivelatra ny fisafidianana ireo mpividy, na izany aza, dia manondro safidy sarotra ho an'ny olona izay manapa-kevitra ny hampitombo io voankazo io ao amin'ny zaridainany.
Matetika ny mpamboly dia maniry ny hanova ny karazam-boalaza maniry ao amin'ilay tranokala, saingy tsy te handany fotoana hambolena kirihitra vaovao izy ireo. Amin'ity tranga ity, ampiasao ny fomba fitsaboana vakim-paritra, izay hazavainay amin'ny antsipiriany ao amin'ny lahatsoratrareo. Fa maninona ny voaloboka dia tsy maintsy ilaina ny mahatakatra ny antony ilàna azy.
Pinot noir divay sy voaloboka
Androany dia hiresaka momba ny karazana voankazo tsara tarehy "Pinot Noir", izay ampiasaina hanamboatra divay miaraka amin'ny tsiro mahafinaritra. Hianatra ianao hoe aiza no misy ny tanimboaloboka, ny divay dia sarobidy, sarotra ny mampitombo ny karazany ao amin'ny tranokalanao. Resaho ny hevi-dehibe momba ny fambolena sy fikarakarana ny tanimboaloboka.
Bibikely anana anana: ny tsiambaratelon'ny fambolena goavana be
Fivarotan-davenona ho an'ny holatra: ahoana ny endriny, aiza izy no miaina, ary mihinana azy
Inona ireo karazana kôkômbra tsara kokoa ny mamboly amin'ny tany malalaka?
Ny "Pharmaceuticals" tany, ny fitomboan'ny zana-ketsa ny tavy ao anaty takelaka tavoahangy
Mpinamana hafahafa: famaritana, sary
Inona no lozam-piaramanidina tsara kokoa ho an'ny atody goose
Gooseberry "Krasnoslavyansky": ny toetra, ny tombony ary ny tsy fahampiana
Ny fomba sy ny fomba tokony hitondrany fofona ao anaty ombivavy
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Voaloboka